Communication Skills • Brand You Academy
4. Communication steps
6. Beagood sender – 1
7. Beagood sender – 2
8. Methods and channels
9. Influencing factors on how people perceive
10. Summary and2key E’s in Communication
ဒီသင်ခန်းစာမှာ ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှု ဘဝမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အရေးပါလှတဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုဆိုင်ရာ အသိပညာတွေ၊ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် တွေကို အသေးစိတ်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Online Course မှာ Communication က လူနေမှုဘဝမှာ ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါသလဲ။ Communication Skills ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ Communication ရဲ့ အမျိုးအစားတွေ၊ Communication ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအကြောင်း။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ ပေးပို့တဲ့သူ၊ လက်ခံရယူတဲ့သူ၊ အသုံးပြုတဲ့ Channels တွေ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသေးစိတ်။ တစ်ယောက် နှင့် တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာ လွဲမှားသွားတဲ့ ပြဿနာလေးတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲ စတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို အပိုင်း (၁၀) ပိုင်း ခွဲခြားပြီး ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Course ကို Communication ကို အဓိကထားပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ Professional တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Career ကို ပိုပြီးတော့ တိုးတက်ချင်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝမှာ Communication ကြောင့် ပြဿနာဖြစ်နေရတဲ့သူတွေ တက်ရောက်သင့် ပါတယ်။
Beagood sender – 1
Beagood sender – 2
Influencing factors on how people perceive
Summary and2key E’s in Communication